Andao hiresaka momba ny kanelina. | Avy amin'ny Linux
Andao hiresaka momba ny kanelina.
Nano | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, hafa
Andao hiresaka kanelina, tontolon'ny birao vaovao, raha ny marina, heveriko fa io no vaovao farany ananantsika ao anatin'ny ekosistra eo amin'ny birao GNU / Linux.
Eny, heveriko fa efa tokony ho fantatry ny rehetra ny helo resahiko, saingy tsy nisy nanandrana azy ireo na nampiasa azy io izao, angamba ny sasany, tsy hanao jeneraly aho, saingy raha tsy misy fampahalalana momba an'ity tontolo vaovao ity sy hevitra manokana dia handeha aho hanome ny andraikitra hiresaka kely momba izany.
Fanamarihana: Sary eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Marihina fa io tontolo iainana io no ataoko loha laharana ary mandray anjara mavitrika amin'ny fanaovana tatitra momba ny bibikely sy ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'ny tetikasa Github, ho an'izay liana rehetra dia atoro anao ny hijery github linuxmint / kanelina ary misorata anarana raha te hanana olana.
1 Teôria kely:
1.1 Ary… Ny fanaingoana, fanitarana, fanaingoana ary fitaovana amin'ny tontolo iainana?
Efa fantatsika rehetra izany kanelina dia fork an'ny Akorandriaka gnome, miankina amin'ny Gnome 3. Izy io dia manana endrika faran'izay kely nefa tsara tarehy ary ny fiasan'ny Gnome 2 afangaro amin'ny zavatra sasany avy Gnome 3 toy ny faritry ny rindranasa sy ny birao efa fantatra ao amin'ny Gnome Shell.
Fa andao hiroso amin'ny zavatra mahaliana antsika, ny tontolo iainana ary ny hevitro momba azy.
Voalohany indrindra, tsy maintsy hazava tsara fa, na dia efa ao anatin'ny dingana "marin-toerana" aza izy io dia mbola eo am-pivoarana mijidina satria tsy mihoatra ny 3 volana akory izy io, ka izao mila mivoatra ity birao ity raha ny marina. , Sahiko ny milaza fa ao anatin'ny telo volana latsaka dia hanana tontolo iainana feno isika afaka miatrika ireo lehibe toa azy Shell, Unity, Xfce, KDE ary ny hafa, ary hoy aho mijoroa, aza mandresy na mifaninana mivantana, fa miarova tena na dia amin'ny masonao aza.
Ambany ny fitsapako azy Ubuntu 11.10 (Ny fahasasarana tsy mila mitsambikina vao manandrana manapaka ny hatoko) ary hatreto dia nahavita tsara be aho; somary tsara lavitra noho ny nampoizina.
Amin'ny haavon'ny fihinanana loharano, mavesatra ny tontolo iainana, tsy maintsy ekentsika izany, alohan'ny hanampiana ny PPA sy hametrahana indray ireo fonosana nandevona ahy 1.1GB an'ny RAM raha tsy manao na inona na inona ianao, mamely izany rehefa tsy manana RAM be dia be ianao (misaotra fa manana ampy aho ary miaraka amin'ny hafainganam-pandeha / latency tsara) fa minimalist araka ny fijeriny azy dia tsy maivana. Rehefa avy nametraka tamin'ny zava-drehetra nohavaozina aho dia nahatsikaritra izany kanelina nandeha nametaka sakafo ary ankehitriny tsy mihinana loharanon-karena be dia be 600-700MB raha mbola manana aho Firefox, Banshee, safo-drano y fiaraha-miory misokatra, na dia indraindray aza aho mbola mitifitra fanjifana 1GB, tsy handainga aminao aho, na dia tsy tokony hohadinointsika aza fa mbola betsaka ny poloney ity tontolo birao ity ary amin'ny kinova vaovao dia azo antoka fa hampiorina ity olana ity izy ireo Efa nitatitra ny linuxmint / kanelina momba ny olana GitHub aho.
Bugs? Mazava ho azy fa marina izany, tsy handainga aho, omeko anao ny tatitra sy hevitro feno sy marina, manolotra bibikely manelingelina fa tsy matotra ny tontolo iainana; Farafaharatsiny mba tsy ho ahy.
Ny voalohany dia tsy mampiseho programa sasany ao amin'ny Mintmenu, anisan-dry zareo UbuntuOne y Software Center, ka raha tsy hainao ny mifindra manodidina ny terminal dia mbola tsy mamporisika anao hampiasa aho kanelina satria izaho, farafaharatsiny, manao ny zava-drehetra avy amin'ny terminal ary raha tsy azoko na tsy fantatro ny anaran'ireo fonosana dia ataoko izany:
Ary ankehitriny, vonoy, apetrakao daholo.
Fa raha mbola tsy hitako izay tadiaviko dia tsy misy:
Ary voila, izaho no mitantana ny programa.
Saingy mbola zavatra tsy maintsy ahitsian'izy ireo ao anatin'ity tontolo ity izany, tsy haiko raha sendra ny hafa izany fa izaho kosa.
Ny olana kely hitako dia ny tsy ahafahako manova ny lohahevitry ny windows, tsy haiko ny antony fa ilay tonga tampoka fotsiny no fantatro, fa tsy zavatra ratsy ny maty ka tsy manelingelina ahy , raha ny tena izy, dia toa tsara amiko ilay izy ka maninona no manamboatra baolina amin'izany?
Ankoatr'izay sy ny fanjifana, tsy misy zavatra ratsy tokony hotaterina momba ahy ... izao.
Ankehitriny, momba ny fampiasana dia tsy maintsy milaza aho fa afa-po be aho, tsotra izany, ny zava-drehetra dia azon'ny tsindry indroa ary tsy dia sarotra takarina akory.
Ny fitantanana ao amin'ny faritra fampandrenesana dia tena tsotra, ny faritra mozika dia mahazo aina ary ny varavarankely dia mazava sy mora azo, amin'ny fampiasana dia omeko 10 avy amin'ny 10 izy io.
Ary… Ny fanaingoana, fanitarana, fanaingoana ary fitaovana amin'ny tontolo iainana?
Eny, tsy hoe matanjaka be eo amin'io faritra io izy raha ampitahaintsika amin'ny biby goavambe toa an'i KDE izay manana folo taona mahery eo amin'ny fivoarana sy ny fivoarana tsy miova, na miaraka Xfce izay manana ny fijeriny.org manokana, na miaraka amin'ny rahalahiny Shell izay manana lohahevitra tsy manam-petra hanamboarana ...
Izy io dia, araka ny fantatro, fanitarana ny toetrandro (izay tsy ampiasaiko izao) ary farafahakeliny hira 5 manokana (mahafatifaty tokoa, saingy vitsy), mazava ho azy Gnome Tweak Tool ary ny rafi-pandrafetana azy manokana "Cinnamon setting" izay vao niseho, ka amin'io lafiny io dia mbola tena fototr'izany izy saingy averiko indray, izany rehetra izany dia tratra tao anatin'ny telo volana latsaka ary tokony hanome voninahitra ny mpiara-monina isika noho io satria tsy diso lalana isika.
Ka, raha ny hevitro manokana dia afaka milaza zavatra maro aho, ny voalohany dia izany kanelina Tiako izy, tiako be, mampatahotra sy vanim-potoana, afaka mijoro amin'ny fahatsorana ilay totozy birao malaza antsoina hoe XFCE (Vonona hiady aminao aho sola) ary tena tsara tarehy, toy KDE (hanohitra anao koa Gaara), saingy mila mitombo izy io mba tena afaka milaza fa afaka manamboatra toerana eo akaikin'ny lehibe.
Rehefa miatrika ny olan'ny fahombiazana dia mbola malemy ihany ny mahantra, saingy mivoatra izy ary tsy maintsy ovaina izany satria tsy maintsy ovaina izy io, na dia tsy ratsy amin'ny ramako 4gb (ddr3 @ 1600mhz aza aho, raha tsy mazoto mino na inona na inona, dia fampahalalana iray fotsiny) ary ireo fitaovako hafa.
Raha miditra amin'ny fitaovana, fikirakirana sns isika, dia hoy aho fa kamo ihany koa eto fa miverina ilay alika nibebaka; Izany rehetra izany dia tratra tao anatin'ny fotoana fohy, omeo voninahitra ny clem sy ny fiarahamonina, fa raha tsy manao kôkômbra ianao hanampy anao dia tsy afaka miteny koa.
Mijanona ho ahy fotsiny ny milaza fa mahatsiaro ho ratsy kely aho satria tsy afaka nanao zavatra bebe kokoa ho an'ny tontolo iainana satria tsy dia mandeha tsara ny fandaharana, mbola rookie tamin'ny semester faha-3 aho ary tafintohina, saingy manohana araka izay tratrako aho ary izany dia mitatitra bibikely, mamaha ny fisalasalana ary mandray anjara amin'ny karazana fitsapana sy fifanakalozan-kevitra mba hanome farafaharatsiko fasika. Raha tian'izy ireo ny afaka manao zavatra mitovy amin'izany ary manampy kely ilay tetik'asa, na raha tsy izany dia ataovy amin'ny hafa izany, tsy maninona izany, ny tiana horesahina dia ny famerenana zavatra ho an'ny fiarahamonina manome antsika betsaka.
Ho ahy manokana, nahatratra ny tontolo iainako aho ary toy ny tany ny fofony, manamboatra fantsona aho hoy izy ireo, ilay lehilahy sola Xfce, Andriamatoa anime miaraka amin'i KDE ary izaho miaraka kanelina, hahitana hoe iza koa no manatevin-daharana tontolo hafa.
Birao Peladito ...
Ny menu-mint, tsotra ve?
Dialogs ho an'ny vatofantsika.
Tsy ela dia hitarina ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mozika, tambajotra ary kalandrie.
Mora ny manova lohahevitra ary mitazona an'io endri-javatra mialoha ny Shell tiako io.
Niakatra be ny fanjifana, io no maharatsy ny kanelina amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Andao hiresaka momba ny kanelina.
Eny, tsara, nieritreritra aho fa ho maivana, ary, ho hitantsika rehefa mandeha ny fotoana
Araka ny nohazavain'izy ireo tamiko dia ny avo kokoa ny ondrilahy (4gb amiko) ny rafitra no handray sy hampiasa bebe kokoa.
Mahitsy, raha ny fanazavako fa maivana ho ahy izy ary tiako ny CINNAMON, io no akorandriaka tsara indrindra hitako ary miara-miasa amin'ny akorandriaka Gnome XD aza izy io
Ny an'ny ondrilahy lehibe kokoa, ny fampiasana betsaka kokoa, tsy maintsy misy fetrany izany, efa nilaza zavatra momba izany ve izy ireo? Ny tiako holazaina dia hoe, raha manana ondrilahy 4 gb ianao ary maka 1 aho, mandra-pahoviana no hitondra ahy miaraka amin'ny ondrilahy 8 gb?
Heveriko fa tsy maintsy misy fetra ny tontolo iainana.
Andao hojerentsika, hazavaiko kely ny momba ilay hoe "avo kokoa ny RAM no avo ny mpanjifa."
Ny fampiharana toa izany, ny rindrambaiko dia mandany zavatra tsara mitovy raha manana 1GB ianao toy ny hoe manana 4GB na 8GB ianao, ankehitriny… aiza ny mahasamihafa azy?…. tsotra, ao anaty cache izay ampiasain'ny rindranasa / rindrambaiko.
Izany hoe, hitan'i Cinnamon fa tsy manana RAM 1GB fotsiny ny rafitrao, noho izany dia mametra ny tenany / manamboatra ny tenany hampiasana 100 na 200MB farafaharatsiny ho an'ny cache manokana ilainy (nomeko ohatra isa).
Raha mahatsikaritra fa manana RAM 8GB ny solosaina dia mazava ho azy fa tsy ho voafetra (100 na 200MB) ary mety handany 500 na 600MB ary hampiasa azy io ho an'ny cache.
Ny dikan'io dia tsy dia saro-pantarina, izany hoe ... arakaraka ny cache ampiasain'ny rindranasa / rindrambaiko, arakaraky ny habetsaky ny fisian'ny zava-drehetra, ny fampiharana dia hiasa bebe kokoa, haingana kokoa.
Fanazavana mazava be.
Ny andro hafa dia nanandrana aho ary ho an'ny kely izay ananan'izy ireo dia tena tsara izany. Ny tiako amin'ity tetik'asa ity dia ny mampiseho amintsika izay mety ho nataon'ny gnome raha tsy maika be izany.
Satria miasa tsara ny akorandriaka saingy ho an'ny birao dia tsara kokoa ny tontolo nentin-drazana. (Amin'izao fotoana izao)
Tsia, tsia ……. Manana PC 1 GB aho ary na dia ao amin'ny Cinnamon 1.1.1 na 1.1.2 aza dia tsy mihinana zavatra manakaiky ny 1 GB mihitsy aho, nankany amin'ny 600 MB
Manomboka izao kanelina Nisy izany ary napetrako tao amin'ny Linux Mint hanaporofoana izany ary ny marina dia na eo aza ny tolo-kevitra lehibe dia mbola tsy tiako izany, saingy tsy maintsy miaiky aho fa noho ny antony manokana io fa tsy amin'ny fandidiana.
manantena aho fa kanelina efa masaka ho an'ny kinova manaraka Linux Mint LTS
Amin'ny fomba Tina. Firefox 12.0a1? 0
TPT! Ie, karazana izany Firefox Fitsapana ny famotsorana.
Tsy marina ny fahitana azy ... tsy maharikoriko ny mijery azy fotsiny ... "Mandany be loatra hamela kely AZY"… izay no olana.
Aza mikotroka balaonina KZKGGaara. Kanelina dia mamela izay rehetra avelan'ny Gnome 3. Tsy azonao ampitahaina amin'ny KDE (aza mieritreritra an'izany) satria mbola kely noho ny 3 volana ny fivoarany. Ary koa, ny mpampiasa dia tsy mampiasa ny ankamaroan'ny fiasa amin'ny birao foana. Sa ianao hilaza amiko fa manararaotra ny safidinao KDE rehetra ianao?
Kanelina no hevitra tsara indrindra hitan'ireo tovolahy tao Mint hatrizay, satria nomen'izy ireo mpampiasa Gnome 2 traikefa tsy tian'izy ireo hanjavona amin'ny fampiasana ny Gnome Shell.
Mahitsy, ohatra, tsy mampiasa Nepomunk aho ary tsy mila an'io mihitsy XD Cinnamon dia miasa tsara ary mamela ny fanovana ny lohahevitra amin'ny tsindry 2 fotsiny, kanelina mbola eo am-piandohan'ny toerana izay tsy misy ny dikanteny dia efa azo ampitahaina amin'ny ny akorany avy any Gnome ary tena nahaliana ahy izany, tiako ny CINNAMON ary amin'ny mint dia tsy afaka mijanona mampiasa azy aho 🙂
Tsy hanomboka tsy hitoviana amin'ny mahazatra foana aho ... ampahatsiahivo anao fotsiny fa tsara kokoa ny hisian'ny safidy maro tsy hita. Tsy maninona na tsy ampiasain'ny mpampiasa aza, tsara kokoa raha manana safidy 1000 izy ireo satria amin'ity fomba ity dia miantoka fa izaho, ianao na mpampiasa hafa, dia hanana izay tadiaviny ary betsaka kokoa, fa tsy manana safidy 10 fotsiny.
Fa izao fotsiny ny hevitro 😀
Ny zavatra tsirairay miaraka amin'ny tanjony. Xfce tsy mbola nanambara ny maha izy azy KDE, hanome ohatra anao. Ny fananana zavatra fanampiny be dia be fotsiny dia iray amin'ireo antony mahatonga ny KDE handevona tsikelikely ny fitadididinao RAM. Sa hadinonao ny Akonadi + Virtuoso + Nepomuk? Ny tiako holazaina dia samy manana ny tanjony ny zavatra tsirairay ary araka ny nolazaiko dia tsy afaka mampitahanao zavatra iray hafa ianao.
BTW… misy olona manodidina ve mieritreritra an'izany kanelina fanariana indray ve izany? Tsy mangataka izany amin'ny toe-tsaina ratsy aho fa satria namaky tamin'ny toerana hafa aho Akorandriaka gnome y Unity izy ireo no "tsara" indrindra ary kanelina mba hampitonena fotsiny ny filan'ireo nahazo ny birao folo taona lasa izay.
Izaho manokana mino izany Cinnanon Soso-kevitra lehibe izany ary tsy hijanona tsy hiasa mihitsy io karazana birao io fa hey… Te-hahafantatra izay eritreritrao aho.
Heveriko fa hanomezana fahatanorana ireo antitra ... kanelina mampiasa hevitra ny Shell toy ny asehon'ny sariko ary mampiasa teknolojia Gnome3 izy, ka tsy misy "Backlight" mihitsy. Raha ny marina raha miresaka momba ny birao isika kanelina dia, miaraka amin'ny KDE, XFCE ary ny sasany hafa ihany no tena miasa amin'ny birao tsy toy ny Unity izay toa mifantoka kokoa amin'ny tactile na Shell hitako mifantoka amin'izany, tactile ...
Raha ny marina dia heveriko fa ireo voalaza etsy ambony ireo dia ny filan'ny crybabies hafa izay maniry zava-baovao, zavatra toa tsara nefa tsy mandeha araka ny fahitana azy ary manana ny antony ilazako azy aho ... Firy ny tsindry ataon'izy ireo hahatratrarana zavatra iray. amin'ny Unity ary firy ny toerana mety hipetrahan'ny docko? Na ohatra, ahoana no ilaina Shell tsy misy ny fanitarana anao? Ary ankehitriny ... inona no tokony hatao kanelina ka mahomby tsara?
Raha toa ka tafavoaka ela loatra io hevitra birao io dia tsy an-tsitrapo izany, satria izy miasa ary maharitra izay rehetra mandeha ... Fa maninona no tsy lany tamingana ny kalalao na maninona no sarotra be ny mamongotra vitsika? Mandrosoa, ny ady hevitra rehetra momba ny birao dia ny faniriana madio hanapotika ny atody, satria miverina aho ary mamerina, kanelina Izy io dia efa manana fototra vaovao miaraka amin'ny fampiasa mahazatra ary tsy misalasala aho fa hampiditra ny tontolo iainana tsara indrindra amin'ny fotoana ary hametraka ny foto-keviny manokana eo amin'ny latabatra ihany koa ...
Dime Tina Hitanao ve kanelina toy izany? Heveriko fa samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy ny tsirairay, satria raha miresaka avant-garde tsy misy isalasalana isika KDE dia ilay manana tombony amin'ny zavatra atolotra azy ary mitovy tanteraka amin'ny kanelina eo amin'ny sehatry ny fitantanana varavarankely ...
Ok, helo, tsy nanidy mafy aho tamin'ny hevitra farany ary nibolisatra aho, azafady ... tsy haiko ny manitsy ny hevitra
Tsia, tsy tsara daholo ny zava-drehetra, samy manana ny heviny ny tsirairay ary mitombina izany.
Amin'izany rehetra izany aho dia miombon-kevitra aminao zato isan-jato mankany amin'ny toerana tiako, ajanoko io, karakarao fotsiny ny fomba fiteninao ary ho mandeha ny zava-drehetra, ara-dalàna raha misy te-hanala ilay voangona.
Raha ny marina dia niantso ny sain'ny olona iray tao amin'ny bilaogiko aho izay niaraka tamin'ny vazivazy manambany, nanomboka nanorisory ahy, ary nandoto ny bilaogiko
Tiako izy izany.
Mora kokoa, Haingana, maharitra (Mbola anaty beta).
Manana ondrilahy 3 aho ary zara raha mihinana 50 megabytes ao amin'ny Arch.
Ho ahy dia ny biraonao mandritra ny androm-piainana na dia amin'ny beta aza.
Afaka mampiasa kanelina amin'ny Tuquito 5 ve aho? Izay mitovy amin'ny Ubuntu 11.04. Ny lahatsoratra rehetra hitako dia ny fitsapana azy fa amin'ny ubuntu 11.10. Mety misy mahalala manampy ahy 🙂
Ny marina dia manana ny azy manokana ny birao rehetra, tsy mpankafy azy aho. Tiako foana ny gnome 2, ary raha ny marina dia mbola manana ny Mint 10 Gnome miaraka amin'ny LMDE miaraka amin'ny tontolo iainana KDE aho (miaiky aho fa rehefa nanavao sy nahita ny Gnome 3 dia taitra aho ary nandrora afo tamin'ny vavako). Ankehitriny fa ny gnome 3 dia azo ampiasaina kokoa noho ny tamin'ny fotoana nivoahany dia nanapa-kevitra ny hanandrana izy, manandrana mianatra ny fomba fampiasana sy ny fanamboarana azy aho (somary mandreraka, betsaka kokoa raha te hanova ny lokon'ny lohahevitra ianao) , saingy rehefa mandeha ny fotoana dia mieritreritra aho fa ny gnome 3 dia birao iray mampanantena. Mila mandany fotoana hitsapana ny XFCE lavitra kokoa aho. Miankina amin'ny filàna sy izay tiana hatao amin'ny birao izany rehetra izany, io no zavatra tsara indrindra eto amin'ity tontolon'ny Linux ity. Miarahaba.
Te-hanamarika fotsiny aho fa ny Cinnamon in Arch dia mandany 51MB amin'ny solosaina finday misy RAM 2GB, ary miaraka amin'ny Evernote sy Chromium mihazakazaka, ireto farany manana tabilao 6 misokatra.
Amin'izany dia te hampiseho aho fa na dia tsy mazava loatra aza ny fihinanana azy dia tsy dia avo tahaka ny voalaza ao amin'ity fidirana ity; Tsy haiko raha satria efa namboarin'izy ireo izany bibikely izany na noho ny fitondran-tenan'i Arch maivana noho ny Ubuntu.
Ny tena tadidiko fa nandany azy dia manodidina ny 100-150MB RAM, ary izany dia miasa miaraka amin'ireo takelaka misokatra sy rindranasa marobe mihodina miaraka amin'izay.
satria ao amin'ny Arch dia maivana kokoa noho ny an'ny Ubuntu izy
Nieritreritra aho fa azo inoana fa saingy mbola tsy te handray an-karama azy fotsiny aho. 😛
Mahita varavarankely be mpampiasa eto aho hehehe
yathedigo dia hoy izy:
Filazana ho an'ny mpitety: Ireo mpamily ati vaovao (12.1) dia efa mamela ny karatra an'ity marika ity hiasa amin'ny akorandriaka; Tsy dia toy ny kanelina 1.2 napetrako fa mampiseho hafahafa rehefa manidy na mampitombo ny windows .. na dia amin'ny farany aza dia efa zatra ny firaisankina aho :-)))
Oh fiainana inona ity!
Mamaly an'i yathedigo
hello Cinnamon no akorandriaka tsotra tsara indrindra ary mamirapiratra amin'ny fijerena azy ... tsara aho nanandrana distros Linux gnu maro ary marina ny fijanonako amin'ilay vaovao dia ny linux mint debian 12 huf tsy manana olana tsara aho hatreto herinandro ary tsy nilalao divay tamin'ny divay ... ny haingana indrindra ary raha ny amiko dia mandany ahy 258mb ram tsy misy afa-tsy izaho dia tsy nametraka vokany dia teraka .... Manantena aho fa ny linux geek supers dia hahatratra ny varavarankely mivantana sy veloma na dia misy divay aza ireo lalao izay mihazakazaka dia manana kalitao tsara sy fihetsika lehibe kokoa noho ny amin'ny windows tsara veloma ary
Mijanona miaraka amin'ny mint debian 12 aho
bixo dia hoy izy:
Tsy afaka manokatra ny rafitry ny rafitra amin'ny kanelina aho
Mamaly an'i bixo
Hanery ny sakana UEFI amin'ny fitaovana ARM i Microsoft
Inona no atao hoe Debian CUT? Alternative tsara amin'ny LMDE